N'agbanyeghị ahịa ndị ahịa, Ahịa Arụ Ọrụ Dị Ike | Martech Zone
Agencylọ ọrụ ọzọ nọ anyị n'olu n'ọhịa gara n'okpuru ọnwa a. O nwere njirimara niile nke nnukwu ụlọ ọrụ - onye ndu nwere ọgụgụ isi, otu ndị otu ọrụ raara onwe ha nye ụwa, ebe mara mma na ime obodo, yana impeccable branding online with a premiere publication. Ha egosiputa usoro nke di n'ime nke gha agha ma nweta ahia ma nyefee ndi ahia ha ahia. Ma ọ ka n'okpuru.
Agencylọ ọrụ anyị, DK New Media, anọwo na nke a maka afọ 7. M na-egwu egwu (n'agbanyeghị na ọ bụghị na Na), nke a bụ mmalite 7 afọ m. Ekwewo m ka ụlọ ọrụ ahụ jiri obi ụtọ rie ndụ m. Anyị enweela oke mbibi na ọdịda n’oge ahụ. Ndị kasị elu dị elu jetsetting n'ụwa niile na-enyocha ụlọ ọrụ teknụzụ azụmaahịa maka ndị na-etinye ego. Ihe kacha dị ala bụ ịhapụ ndị ọrụ, anaghị anara ha ụgwọ ọnwa, ma na-akwụ ụtụ isi.
Anyị ka nọ gburugburu taa mana enweghị m ike ịchọpụta ihe kpatara otu ụlọ ọrụ nwere nnukwu onyinye ga-apụ ma anyị ka na-aga n'ihu. Ikekwe, ọtụtụ n'ime ya bụ na ọdịda abụghị naanị nhọrọ. Ọzọ bụ na anyị enwetabeghị afọ ojuju n'ịzụlite usoro ma resị ya ndị mmadụ. Anyị bụ ndị agile shop na-eso a kpuchie (n'okpuru), mana na-ewulite azịza omenala mgbe niile dabere na ọdịiche na ohere ndị ahịa anyị nwere.
Ihe isi ike bụ na ihe ọ bụla ị gụrụ na ntanetị bụ mfe ọ dị. Ndepụta ahụ, infographics, ebook, nyiwe… onye ọ bụla chọrọ ịgwa gị otu ọ dị mfe ịzụ na ire ngwaahịa gị n'ịntanetị. Ọ dịghị mfe ma ọ dịbeghị. Uzo nke teknụzụ na-enyere aka na mkpebi anyị ka na-agbaso usoro nke ọwa, ndị na-ajụ ase, na ndị ahịa chọrọ.
Ndị ahịa nwere ike ịzụ onwe ha naanị ihe abụọ - nsonaazụ ma ọ bụ ọnụahịa. Nsonaazụ chọrọ oge na akụrụngwa, mana ndị ahịa anaghị abịakarị anyị nso. Ha chọrọ mgbọ anwansi. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enwe obi ụtọ ịdebanye aha ha ma debe atụmanya na ha bụ mgbọ anwansi, naanị ka onye ahịa chụọ ya n'okporo ụzọ maka atụmanya efu. Ahụrụ m ụfọdụ ụlọ ọrụ nwere ndị ahịa na-apụ apụ dị egwu nke na-amata nke a, echegbula, wee gaa ree otu onye ahịa ọzọ.
Ma Agencylọ Ọrụ a Dị Iche
A afọ ole na ole gara aga, M nwere otu onye na ibe na-azụ ahịa na-akpọ m na-agwa m banyere ịtụnanya gị n'ụlọnga ọ dị nnọọ goro aka ya inbound ahịa. Ha dị oke ọnụ karịa ụlọ ọrụ m, mana ha rụrụ ọrụ na ụlọ ọrụ ya ruo afọ iri ma nwee mmemme pụrụ iche nke ga-eweta nsonaazụ pụrụ iche. Akpọchara m isi ma gwa ya na enwere m nkụda mmụọ na ọ rịọghị enyemaka anyị. O lere m anya sị, “Don'tghọtaghị, ụlọ ọrụ a dị iche. "
O kwuru eziokwu, ọ chụpụrụ ha ozugbo ọrụ ahụ gwụrụ. Ọbụghị naanị nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ akụ wee pụọ na mmekọrịta ahụ na enweghị ihe ọ bụla.
Ọ na-akụda mmụọ n'ihi na ọnụ ụzọ ahụ na-agagharị agagharị na-ahapụkarị onye ahịa ahụ nwere mmechu ihu n'ọnụ ụzọ anyị - na mmefu ego, na enweghị oge ịlaghachi. O doro anya na ndị ahịa ahụ rutere n'ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ a. Otu n'ime nsogbu otu n'ime ndị guzobere n'elu bụ enweghị iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa. Anyị ahụwo otu okwu yiri ya - ị na-arụsi ọrụ ike ịkwaga onye ahịa ma ha ga-ahapụrụ gị mgbọ ọlaọcha (nke na-adabaghị na ebumnuche ya) ma ọ bụ ọrụ dị ọnụ ala.
Mgbe ọ na-agba agba, anyị na-ele onye ahịa anya mgbe ha hapụrụ. Iji maa atụ, nke a bụ onye na-azụ ahịa na anyị mere ka ọnụọgụ ahịa na ndebanye aha na-eme ka a na-enweta ọtụtụ nde dollar. Ọ na-egosi na ha na-azụ azụ mgbe anyị malitere inyere ha aka… so not only is the income gone, so is the investment they made in our agency.
Yabụ kedu ihe bụ isi okwu m?
Agaghị m eme ka à ga-asị na m maara ihe kpatara ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị a dị ịtụnanya ji ada, mana enwere m mmetụta nke ọtụtụ n'ime ya bụ ime na hubris. Ọ na-eche na ị dị iche mgbe ị na-adịghị. Ọ na-eche na ị nwere mgbanaka anwansi mgbe ị nweghị. Ọ na-eche na ị ga - enyere onye ọ bụla aka mgbe ị na - enweghị ike. Nke a abughi nkatọ nke ndị ndu na ndị ọrụ nke tinyere mkpụrụ obi ha n'ọrụ ha kwa ụbọchị, ọ bụ naanị nchọpụta.
Anyị na-anwa ịrụ ọrụ ka mma n'ịtọ ntọala maka ndị ahịa anyị na ha na-azụta ahụmịhe anyị na mbọ anyị. N'ihi na ihe abụọ ahụ dị iche n'etiti ndị ọgbọ anyị, anyị nwere nchekwube na anyị nwere ike ịmegharị agịga ahụ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ma ha chọrọ ịrụsi ọrụ ike. Anyị kwesịrị ịdabere na ahụmịhe anyị iji duzie ndị ahịa anyị site na mmejọ na usoro egosipụtara. Anyị ga-etinyekwa akụ anyị niile - gafee ọwa, gafee ndị na-ajụ ase, ma na-emegharị ngwa ngwa maka mgbanwe na-agbanwe.
Ọ bụrụ n’ịzụghị ọrụ ike, ịkwesighi ịtụ anya nsonaazụ dị elu.
Tags: gị n'ụlọngaDK New Mediaahia ntozu ahiamkpa